Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Billaha Ahaa Jaaliyada Somalida Ogadenya oo Qabsoomay.
Shirkii Billaha Ahaa Jaaliyada Somalida Ogadenya oo Qabsoomay.
Maanta ooy taariikhdu tahay 30/05/2015 waxaa qabsoomay shirkii caadiga ahaa ee Jaaliyada Somaalida Ogadeniya ee wadanka Norway kaasoo laqabto bishiiba hal jeer ama ( sabtida ugu danbaysa bil walba).
Ugu horayn waxaa shirka lagu furay Aayado quraanka kariimka ah waxaana akhriyay SHEIKH CABDINASIR– kadib furitanka shirka wuxuu sheekhu soo jeediyay wacdi diini ah wuxuuna xubnihii goobta fadhiyay xasuusiyay cabsiga alle in la joogteeyo, iyo in xaqa laraaco, dulmiga iyo bahdilkana ladiido. Waxaa kaloo sheekhu kahadlay arimo ku saabsan qoxootiga Somaalida Ogadeniya ee ku tabalaysan dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee Yemen in loo kaco oo la tageero.
Kadib wacdigaas waxaa lagu soo dhaweeyay Gudoomiyaha Jaaliyada Soomalida Ogadeniya Ee Norway Mudane: KHALIF ABDI ALI. Gudoomiyuhu wuxuu ka war bixiyay arimahan soosocda:-
Gudoomiyuhu wuxuu war bixin waafi kasiiyay xubnaha shirkii ay yeesheen masuuliyiinta JWXO ee ka dhacay London iyo go`aamadii kasoo baxay waxay xubnuhu isla falanqeeyeen arimo khuseeya shirkaas jabhada ee London.
Waxaa kaloo uu gudoomiyuhu kawar bixiyay shirka guud ee jaaliyada soomaalida ogadeniya ee kadhici doona dalkan Norway hadii alle idmo bisha August ee sanadkan iyo halka ay marayaan hawlihii loogu diyaar garawbayay waxaana lamagacaabay gudiyo farsamo oo loo kala asteeyay hawlo muhiim ah. shirkaas ayay jaaliyadu ku hawlan tahay siduu u qabsoomi lahaa insha alah.
Gudoomiyuhu wuxuu ka dhawaajiyay muhiimada ay leedahay in xubnuhu ay waqtigooda iyo maskaxdooda u huraan sidii qadiyada soomaalida ogadeniya horay loogu socodsiin lahaa. arimo khuseeya xubnaha iyo ka qayb-qadashada arimaha guud ee halganka ayaa Iyana la isla qaadaa dhigay.
Waxaa kaloo madasha kahadlay Hogaanka Abaabulka ee Jaaliyada Mudane ABDISHAKUR ALI BUDUL wuxuu kawar bixiyay abaabulka bulshada iyo wacyi galinteeda xili ay jiraan khiyaanooyin iyo tabo hor leh oo uu cadawgu adeegsanyo si uu u wiiqo xooga aan la loodin Karin ee jaaliyadaha soomaalida ogadeniya . wuxuuna kula dardarmay xubnaha sharafta leh ineey hiil iyo hooba la garab istagaan shacabkooda dhibataysan , hadal aad uqiimo badan oo dhaxal gal ayuu u jeediyay xubnaha..
Madasha waxaa kaloo ka hadlay Xoghaya jaaliyada mudane AXMED CUMAR IBRAHIM. Xoghayuhu wuxuu ka hadlay doorka jaaliyada iyo ahmiyada ay uleedahay guud ahaan shacabka gumaysiga kuhoos jira ee Somaalida Ogadeniya . Shacabkaas oo aan lahayn xuquuq dhamaanteed: Wuxuuna xoghayuhu tilmaamay waajibka saaran qofka xubinka ah ee jooga qurbaha iyo siyaabahuu ugarab istaagi karo shacabka gumaysiga kuhoos jira. Xubnuhu waxay soo jeediyeen fikrado iyo talooyin dhaxal gal ah:
Gabagabadii wuxuu shirku kusoo dhamaaday jawi farxad iyo rayn-rayn leh waxaana la isla qaatay in la sii laban laabo hawlaha halganka .